Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Wasiirkii 2aad Ee reer Dila Oo Hadal Taariikh xumo ah ka tegay. DAAWO
Wasiirkii 2aad Ee reer Dila Oo Hadal Taariikh xumo ah ka tegay. DAAWO
Aug 13, 2016 SOMALI NEWS 0
Borama waa m.madax gobol oo 120 km galbeed ka xigta Hargeysa. Waa magaalo dad badan iyo degaan ballaadhan hoosyimaad.
Waa gobol 2 wadan la leh xad xagga Barriga xaga badana jaar la ah dal carbeed.Waa gobol ku haboon deked iyo madaar labadaba. Lakiin nasiib darro dadkiiisii ayaa noqday faaruq. Masuuliyiintiisiina waxay noqdeen calooshooda u shaqaystayaal damiirkoodu dhintay.
Ilaahay ha unaxariistee Wasiirkii ka horerayay ee uu bedelay oo la odhan jiray Maxamud Axmed Bare Garaad sanadkii ugu dambeeyay muddo xileedkiisii wuxu dafiray xasuuqii iyo boobkii 1991kii jabhadii isaaq ee snm u geysatay shicibka reer Awdal isagoo ku raalli-galinayay kuwii xilka u dhiibay. Ina Cumar yare oo maanta ah wasiirki madaarada oo reer Awdal ka filayeen inuu dhiso haddii kale ugu yaraan madaarka Borama uu xayndaab ku xidho oo uu ka badbaadiyo boobka ayaa yidhi reer Awdal uma baahna garoon diyaaradeed. Intuu leeyahay Boorama diyaarado uma baahna miyuu runta iska sheego oo uu yidhahdo anigu waxba idiinma qaban karo.
Xataa maydkooda dibadaha laga keenayo hargeysay u doonanayaan!!!
Afar arimoodba Borama ugama maarmi karto gego diyaaradeed
1. Waa magaalo madaxfa gobol weyn oo ka mid ah shantii gobol ee waqooyiga ka jiray.
2. Waa magaalo madaxda mujtamac balaadhan oo dal iyo dibad iyo darisba oo baahi u qaba gego diyaaradeed ganacsi iyo rakaaba .
3. Dhismihiisu wuxu soo kordhinayaa shaqo abuur, bilic, dhaqaale, isgaadhsiin iyo adeeg fudud.
Ilaa imika inta la ogyahay masuulkii kali ahaa ee xilkuu hayay reer awdal uga faa’iideeyay wuxu ahaa alaha u naxariistee Aadan Isaaq oo taariikhdu xusayso markii uu ahaa wasiirka Waxbarashada Somaliya.
Dekadana Berberay ku xidhnaanayaan reer Awdal Airportkana Hargeysa.
Taasi waa siyaasada beesha Isaaq, xilkana waxay u dhiibtaan kolba mid aan dhaafin xariiqa loo jeexo oo sidaa Saylici oo kale miishaarka iyo gunnaha urursada oo meherado ka samaysta.
Aadan Isaaq, Awdal Airportkana Hargeysa, Dekadana Berberay, Ina Cumar
Su'aal iyo Jawaabta uu ka bixiyay sheekha caanka ah ee cabqariga ah Dr Zakir. Daawo Xilalkan badani ma daahirinta nijaastii Eygaa?